Tijaabada gaantaallada Kuuriyada Waqooyi halis ma galin karaan diyaaradaha ganacsiga? - BBC News Somali
Tijaabada gaantaallada Kuuriyada Waqooyi halis ma galin karaan diyaaradaha ganacsiga?
15 Sebtembar 2017
Gantaal Tijaabo ah
Markasta oo Kuuriyada Waqooyiga ay gantaal tijaabo ah dulmariso dalka Japan, kadibna uu ku dhoco badweynta Pacific, waxaa ay gantaaladaas sidoo kale dulmaraan diyaarado rayid ah.
Dowladda Japan waxa ay afuuftaa siiri ay shacabkeeda uga digayso in ay gabbaad ka galaan gantaalada Kuuriyada Waqooyi, balse ka waran haddii gantaalada ay haleelaan diyaarad uu shacab ka buuxo oo hawada maraysa?
Tani waa su'aasha ay dad badan isweeydiinayaan kadib tijaabooyinka joogtada ah ee xukuumadda Pyongyang ay samanayso si digniin la'aan ah.
Suurtogalnimada in tan ay dhacdo waa mid aad u yar, hase yeeshee xeeldheerayaasha waxa ay tilmaamayaan in ay jirto halis.
"Haddii gantaal uu ku dhoco diyaarad shacab, waxaa aad u kordhaya suurtogalnimada in talaabo militari ay Maraykanka iyo xulafadiisa ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi" ayuu yiri Vipin Narang oo ah bare jaamacadeed.
"Tijaabooyinkan gantaalada waxa ku sugan halis badan oo ay wajahayaan diyaaradaha shacabka ah" ayuu yiri Ankit Panda oo ka mid ah tifaftirayaasha majaladda The Diplomat.
Kuuriyada Waqooyi masii sheegto tijaabada gantaaladeeda, taasina waxa ay micnaheedu tahay in si digniin la'aan ah loogu liishaamo marinka diyaaradaha shacabka ah. Balse dalalka kale waxa ay sii bixiyaan digniin si diyaaradaha iyo waliba maraakiibta ay uga digtoonaadaan halista gantaalka.
Kuuriyada Waqooyi waxa ay galaangal u leedahay hawada caalamiga ah si la mid ah dalalka adduunka intiisa kale , waxayna heli kartaa xogta ku saabsan mashquulka hawada, sidaas darteed waxa ay ogaan karaan meelaha iyo xiliyada firaaqadu jirto.
Kuuriyada Waqooyi waxa ay tijaabisaa gantaaladeeda iyada oo aanan digniin bixinin
"Pyonyang waxaa hubanti ah in ay doonayso in ay yarayso halista in shil dhoco, si ka duwan sida ay dadka u malaynayaan, ma doonayaan in uu shil dhoco, waxayna eegtaan fursadaha hawada ka jira si ay qatarta u yareeyaan" ayuu intaas ku daray Panda.
Suurtagal ma tahay in Gantaalku katibo ?
Waxaa jira labo arrimood oo suurtogal ah oo aad walwal looga qabo, halistana sii kordhin kara, waxayna kala yihiin.
•In gantaalka uu ka weecdo qadkii uu ku socday, kadibna galo aagga duulimaadyada rayidka ku badanyihiin
•In hawada uu ku burburo, kadibna burburkiisa uu halis galiyo diyaaradaha
Marka ay tijaabo sameeyaan, waa ay u dabaaldagaan, iyaga oo gantaalka dulmariya bugcad yar oo ka tirsan dalka Japan, ujeedkuna waxa uu yahay rajada ay ka qabaan in tijaabada ay noqoto mid lagu guuleystay.
Balse tijaabooyinkii ugu dambeeyay ma ahayn kuwa guulo waaweyn laga gaaray sida la rumeysanyahay, waxayna taas ka dhigantahay in uu katibi karo, islamarkaasina gali karo hawo ay diyaaradaha ku badanyihiin.
Waxaa kale oo jirta in gantaalka uu hawada dhexdeeda ku burburi karo, kadibna qalbacyadiis ay halis galin karaan diyaaradaha shacabka.
Marka ay halkaas taagantahay, waxaa labadan arrimood aad suurtogal uga sii dhigaya heerka guuldarada tijaabooyinka gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi oo aad u badan.
Inkasta oo halista ay aad u yartahay, haddane diyaaradaha waa kuwa durbaba bilaabay in ay ka digtoonaadaan waxa dhici kara.
Diyaaradaha shacabka waxa ay hadda qorshahooda ku darsadeen in aysan dul marin Kuuriyada Waqooyi iyo meelaha gantaalada lagu tijaabiyo.
Bishii Agoosto diyaaradda Air France ayaa balaarisay aagga duulimaadka ka caaggan ee hawada Kuuriyada Waqooyi.
Air France ayaa ka mid ah diyaaradaha badalay qadkii ay ku duuli jireen cabsida gantaalada awgood.
"Go'aankan ayaa waxa uu yimid kadib markii mid ka mid ah diyaaradahooda uu gantaal u maray wax ka yar 100km, wuxuu ahaa duulimaad u gooshayay magaalooyinka Tokyo iyo Osaka, hadda waa la badalay qadkii hore, waxayna maraan qad kale oo ay ku qaadato illaa 30 daqiiqo oo dheeraad ah" ayuu yiri Ellis Taylor oo ah xeeldheere xagga duulimaadyada adduunka.
Ugu dambeyntii waxaa jirta arrin kale oo iyadana laga fikirayo oo aanan ahayn kuwaas hore, waxayna la mid tahay wixii ku dhacay duulimaadkii MH17 ee lagu soo ridey Ukrain, diyaaradaha ay ogyihiin in duulimaadyadooda lagu qaldi karo kuwa militari, kadibna gantaal lagu dhufan karo.
Tan waxa ay ka dhigantahay in haddii ay sii kordhaan xasaradaha ka jira gacanka Kuuriya in diyaaradaha ay gabi ahaanba la leexan doonaan hawada gobolkaas oo dhan.
US: Waxaan burburinay 20% diyaaradaha Suuriya
Daacish oo laga saaray garoonka diyaaradaha Mosul
Diyaaradaha dagaalka Israel oo weerar ku qaaday Suuriya
TOOS Shiinaha oo lagu eedeeyay in uu si kutalagal ah u fasaxay gantaalka
Daraasad: Shaki laga muujiyey isticmaalka dawo-dhireedka miisaanka lagu yareeyo